Fivelarana mitondra soa lehibe
"Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy dia hahavery izany; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia izy no hamonjy izany. Fa inona no soa azon'ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy, na mati-antoka izany izy?" - Lio. 9:24-25.
Androm-piainana iray ihany no omena antsika; ary ny fanontaniana tokony hipetraka amin’ny tsirairay dia ny hoe: "amin'ny fomba ahoana no ahafahako mampiasa ny heriko mba hitondra tombotsoa be indrindra? Ahoana no fomba tsara indrindra ahazoako manome voninahitra an’Andriamanitra sy manasoa ny mpiara-belona amiko?" Satria ny hany maha-sarobidy ny fiainana dia ny fampiasana azy hoenti-mana-tratra ireo tanjona ireo.
Ny adidintsika voalohany amin’Andriamanitra sy ny mpiara-belona amintsika dia ny hampivelatra ny tenantsika manokana. Ny fahaiza-manao rehetra izay nankinin’Andriamanitra amintsika dia tokony hampivelarina amin'ny fahafenoany ambony indrindra, mba ahafahantsika manao ny soa be indrindra mety vitantsika. Koa fomba tsara ampiasana ny fotoana dia ny fampiasana azy ho amin'ny fitandrovana ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina. Tsy misy azontsika avela ho tsizarizary na mana-kilema ny fiasan'ny vatantsika sy ny saintsika. Raha manao izany isika dia tsy maintsy hizaka ny vokany.
Ny olona rehetra dia manana fahafahana tena malalaka hamolavola ny tenany araka ny safidiny. Ny fitahiana eto amin’izao fiainana izao, sy ny hahazo ny tsy fahafatesana, dia eo am-pelatanan'ny tsirairay. Azon'ny olona atao ny hamolavola toetra sarobidy, ka hahazo hery vaovao isaky ny indray mandingana. Afaka mandroso isan'andro ho amin'ny fahalalana sy ny fahendrena izy ireo, ary hahatsapa fifaliana vaovao eo am-pivoarany, manampy hatsaran-toetra amin'ny hatsaran-toetra, manampy fahasoavana amin'ny fahasoavana (...). Ny fahazavan-tsainy, ny fahalalany sy ny hatsara-toetrany dia hitombo ho tonga hery lehibe sy firindrana tsy misy tomika.
Etsy andanin'izany, azon'izy ireo atao koa ny mamela ny heriny ho arafesina satria tsy ampiasainy, na ho simba vokatry ny fahazaran-dratsy, ny tsy fahampian'ny fifehezan-tena na ny tsy fananana faharetana ara-moraly sy ara-pivavahana. Amin'izany dia hitontongana ny fiainan'izy ireo; tsy ankatoaviny ny lalàn’Andriamanitra sy ny lalàn'ny fahasalamana. Resin'ny filàna izy ireo, ny fironan-dratsy no misarika azy hivaona. Moramora kokoa ho azy ireo ny mamela ny herin'ny ratsy, izay miasa tsy ankijanona, hisintona azy ireo hihemotra, toy izay ny hiady hanohitra izany ka handroso. Harerahana, aretina sy fahafatesana no haterak'izany. Izany no tantaran'ny fiainana maro izay tokony ho nahavita be ho an’Andriamanitra sy ho an'ny taranak’olombelona. — CTBH, 41, 42.